Lionel Messi Oo Diiday Inuu Ka Hadlo Arrimaha Cristiano Ronaldo - jornalizem
Lionel Messi Oo Diiday Inuu Ka Hadlo Arrimaha Cristiano Ronaldo
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu dhexda ka galay arrimo dad badan ay ka hadleen fikirkoodana ka dhiibteen, hase yeeshee ciyaaryahanka ay sida weyn u xafiiltamaan ayaa iska diiday in uu ka hadlo xaalada cusub ee Ronaldo.
Ronaldo ayaa waxaa uu dhowaan shaaciyey inuusan ku faraxanayn kooxda Madrid kadib markii uu dhaliyey goolkiisii 149aad iyo kii 150aad.
Mana kala cadda illaa iyo hadda in ciyaaryahankan uusan ku qanacsanayn heshiiska uu kula joogo kooxda iyo in uu ku guuleysan waayay abaalmarinta laacibka sanadka ee UEFA.
Si kasta ha ahaatee Messi wuu diidey inuu ka hadlo arrimahaas. Waxana uu yiri mar wax laga weydiiyey sida uu arko Ronaldo warka ka soo baxay:
“Ma aha inaan ka jawaabo su’aashaa oo kale, ma aha inaad wax iga weydiisaan Ronaldo,” waxana uu intaasi sii raaciyey “Waxba howsheyda ma aham mana ka jawaabayo su’aashaa oo kale.”
Wakiilka Ronaldo Jorge Mendes ayaa Isniintii sheegay in uu ogyahay sababta uusan u qanacsanayn Ronaldo balse arrintaas ay tahay mid uu sheegi doono 27jirka uu wakiilka u yahay.
Ronaldo iyo Messi ayaa waxaa lala xiriirinayay inay yihiin labada laacib ee dunida ugu wanaagsan muddo sanado ah, hase yeeshee labadaba waxaa kaga guuleystey abaalmarinta laacibka sanadka Yurub Iniesta kadib markii uu gacan weyn ka geystey guushii ay xulka qaranka dalkiisa ka gaareen koobka Euro 2012.
“Ma aha arrin quseysa arrimaha Iniesta,”ayuu yiri Ronaldo, oo tababarka la qaadanayay xulka dalkiisa kahor tartanka isreebreebka koobka adduunka. “Kama hadlayo arrintan waxbadan waa inaan xoogga saaraa hadda Portuqal, waxa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsan.”
Ronaldo ayaa ku biirey kooxda Madrid isagoo ka soo tegey Manchester United lacag dhan $131 million sanadkii 2009 waxana uu saxiixay heshiis uu kula joogayo kooxda illaa iyo 2015. Madrid ayaa diiday inay wax faallo ah ka bixiso hadalada ka soo yeeray Ronaldo.